mercredi, 14 septembre 2016 16:12
Birao vaovao FLM : Voatazona ho mpitahiry vola i Lahiniriko Jean
Voafidy avokoa ireo mpikambana ao amin’ny Birao foiben’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Filoha i Pastora Rakotonirina David, Filoha lefitra Pastora Octave Benil, filohan’ny Sinodam-paritany Atsinanana (Farafangana). Tonia i Pastora Randrianirina Dieudonné, filohan’ny Sinodam-paritany Afovoany sady efa Tonia lefitra FLM tamin’ny birao teo aloha nentin’i Dr Rakoto Endor Modeste. Tonia lefitry ny Teolojiana Toromare Mananato, ary mpitahiry vola i Lahiniriko Jean, izay efa nitana io toerana io tamin’ny birao teo aloha.
mercredi, 14 septembre 2016 15:44
Mahajanga : Hitohy ny fanangonan-tsonia
Taorian’ny roa andro teo anoloan’ny Lapan’ny tanàna dia hitohy eny amin’ny tsena Mahabibo ny fanangonan-tsonia ho fanoherana ny lalàna vaovao mifehy ny serasera eto Madagasikara, izay manohintohina ny fahalalahana maneho hevitra, nohon'ny fangatahan’ny vahoaka mbola tsy nahavita ny azy tamin’ny faran’ny herinandro. Haharitra telo andro ity andiany manaraka eny Mahabibo izay karakarain’ny mpanao gazety eto Mahajanga manomboka rahampitso alakamisy 15 septambra 2016.
mercredi, 14 septembre 2016 14:30
Fampihorohoroana Députée Nina : Nidoboka Antanimora ny zanany 4
Nampidirin'ny polisy eny Antanimora ny zanaka 4 taizan'i Nina Rahantanirina taorian'ny fampihorohoroana nataon'ny polisy misarotava 10 mirongo fiadiana izay nilaza hisava ny tranon'i Députée Nina omaly talata tamin'ny 3 ora maraina. Zazalahy 20-22 taona eo avy izy ireo. Rehefa avy nolakoiny tao an-trano, ka namaly ireto zaza ireto, dia ampangaina fa nitana antsy be sy mamaly polisy. Mbola nodarohina ihany koa ry zareo tonga tao amin'ny central Tsaralàlana, ary navoaka kely nentina notsaboina teny amin'ny hopitaly HJRA, ka rehefa vita ny fijeren'ny dokotera dia tonga dia Antanimora. Voamarin'ny mpitsabo moa ity ratra sy daroka nahazo azy ireo ity.
IKM : Mifarana anio ny atrik'asa tanterahin'ny INCIPALS
Misy atrik'asa izay tafiditra ao anatin’ny lohahevitra "fiarahamonim-pirenena sy haino aman-jery mivohy filaminana sy fitoniana ary mamporisika ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena" ataon'ny INCIPALS na Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix Leadership et stabilité ao amin’ny Ivon-toerana ho an’ny Kolontsaina Malagasy na IKM Antsahavola. Nanomboka omaly ary mifarana anio moa ity atrik'asa izay tohanan'ny firaisam-be eropeanina.
mardi, 13 septembre 2016 09:02
Sambava : Lasan’ny Sinoa ny tetezana ?
Nihazakazaka ny olana eo amin’ny fananantany eto an-drenivohitr’i Sambava tato ho ato. Ny sisin-dranomasina dia maro no nototofan’ireo mpanambola, fa ity toe-javatra iray ity indray no nahalasa eritreritra ny maro satria dia nananganan’ny sinoa rindrimbe koa eo ambony tetezana Antaimby, eto an-tampotanana. Ny antsasamanilan’ilay tetezana no notsindriana rindrana lehibe ary atahorana hisy fiantraikany amin’ny tetezana noho ny fisian’ny vesatra maharitra eo amboniny, ny mpandeha voatery midina anaty lalana matetika fa tsy msy andehanana instony ny sisin'ny tetezana. Aiza ny kaominina, aiza ny ministeran’ny Asa vaventy, izay sarotiny amin'ny fikitikitihana ny tetezena ?
lundi, 12 septembre 2016 15:54
Fetin’ny Sorona : Mpino silamo Malagasy an-jatony any La Mecque
Miara-mankalaza ny Fetin’ny Sorona amin’ireo mpino Silamo manerantany ny Silamo eto Madagasikara. Aman-jatony tamin’ity farany no fantatra fa any La Mecque, Arabia-Saodita, amin’izao fotoana izao. Teto Mahajanga, dia nisy fotoam-pivavahana nentina nankalazana io idibe io tamin’ireo Mosquée miisa 15 eto an-tanàna. Nisy koa ireo nanatanteraka izany nanoloana ny “bois sacré”.
lundi, 12 septembre 2016 09:17
12 septambra : Fetin'ny Sorona ho an'ny Silamo
Andro lehibe ho an'ny finoana silamo ity 12 septambra ity, hankalazana ny Fetin'ny sorona. Ho an'ny eto Antananarivo dia etsy amin'ny Mosquée 67ha no hanaovana izany fankalazana izany.